Ndi otu anyi - Muta ahia 2
Scott Ryder Director & onye ahịa azụmaahịa nwere ahụmịhe nwere ikike gosipụtara iji jikwaa pọtụfoliyo ego na-akwụ ụgwọ, nyochaa ma jikwaa ngosipụta ihe ọghọm pọtụfoliyo, yana ịzụlite atụmatụ itinye ego na usoro amụma maka mmekọrịta kachasị ahịa, nke kachasị echekwa. Ntughari dika onye "bulie uzo" maka oru ndi ahia. Kemgbe Ndụ amụ ofụri.
Azeez Mustapha bụ onye ode akwụkwọ nwere ọgụgụ isi, onye ahịa, onye na-enyocha ahịa, na-egosi ọkwa, yana njikwa ego.
Emelitere ikpeazụ: October 1st, 2020